Home > Classes > PADC-11 iOS FTC
PADC-11 iOS FTC
iOS Full-Terms Course မှာ ပါဝင်မဲ့ Course-work တွေရဲ့ အသေးစိတ်ကတော့
- XCode နဲ့ iOS ရဲ့ အခြေခံ UI Component တွေဖြစ်တဲ့ ScrollView, AutoLayout, CollectionView, TableView စတာတွေ
- Swift Programming Language တွေ အခြေခံ building block တွေနဲ့ Functional Programming Aspects အရ ပါဝင်လာတဲ့ nested function လို closure လို powerful ဖြစ်တဲ့ higher order function အပိုင်းတွေ
- Custom View အမျိုးမျိုး တည်ဆောက်ပုံ အပိုင်းတွေ
- Networking Layer, Persistence Layer နဲ့ MVP (MVC မဟုတ်ပါ) လို Redux လို Architecture Pattern မျိုးတွေကို iOS development / code base မှာ setup ပြုလုပ် အသုံးပြုပုံတွေ
- Reactive Programming ရဲ့ concept တွေနဲ့ RxSwift ကို အသုံးပြုပုံ အပိုင်း
- Firebase ၊ Google Play Services တွေနဲ့ local / cloud-based notification တွေ setup ပြုလုပ်ပုံ
- Animation အပိုင်း ၊ Test Automation အပိုင်း ၊ Build Configuration တွေ setup ပြုလုပ်ပုံ အပိုင်း ၊ - Test-Flight ကို အသုံးပြုပြီး internal release တွေ setup ပြုလုပ်ပုံနဲ့ ကိုယ်အောင်အောင်မြင်မြင် ရေးထားတဲ့ App တစ်ခုကို App Store မှာ တင်နိုင်ဖို့ အပိုင်းတွေ ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီအပေါ်က module တွေ အကုန်လုံးကို Swift 5.1 ကို အသုံးပြုပြီး သင်ကြားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ IDE အနေနဲ့လဲ Module တိုင်းကို တတ်နိုင်သမျှ XCode 12.2 ကို သုံးပြိး သင်ကြားပေးသွားနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ် ။
Swift UI နဲ့ Fully Functional ဖြစ်တဲ့ App တစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်တဲ့ အထိ သင်ကြားသွားမှာ ဖြစ်ပြီး
iPad App ကို Mac မှာ run နိုင်ဖို့ porting လုပ်တဲ့ အပိုင်း စတဲ့ WWDC 2020 မှာ introduce သွားတဲ့ Cool APIs တွေကိုလဲ မိတ်ဆက်ပေးသွားဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ် ။
300, 000 MMK
Duration:6Months2Weeks
Total Mandatory Modules 13
Total Selective Modules 0
Getting Started for iOS Development
4 Videos2Lives0Article
ဒီ Module မှာတော့ iOS Development အပိုင်းကို စတင် ထိတွေ့နိုင်ဖို့ အသုံးပြုရမဲ့ Xcode IDE ကို နားလည်နိုင်ဖို့နဲ့ Project အသစ်တစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ အပိုင်း ၊ တည်ဆောက်ထားပြီးသား Project ကို Run နိုင်ဖို့ အပိုင်းတွေကို လေ့လာသွားပါမယ် ။
5 Videos0Live 1 Article
Swift နဲ့ပတ်သတ်ပြီး အခြေခံကျကျ နားလည်နေဖို့ လိုအပ်မဲ့ Data Type တွေ Control တွေကအစ Functional Programming အတွက် Swift မှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုတဲ့ Closure အထိကို လေ့လာသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
6 Videos 1 Live0Article
iOS App တစ်ခုမှာ ပါဝင်တဲ့ Screen တွေကို Implement ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ နားလည်ထားဖို့ လိုအပ်မဲ့ Basic UI Components တွေကို လေ့လာသွားပါမယ် ။
View (UI) Layer in iOS : the Movie App
18 Videos3Lives 1 Article
iOS ကို အသုံးပြုပြီး Industrial Level UI Component တွေ Screen တွေ တည်ဆောက်နိုင်မဲ့အပိုင်း ကို စတင်လေ့လာသွားပါမယ်
SP : View (UI) Layer in iOS : the Movie Booking App
0 Video0Live0Article
Ko Aung Ko Ko Thet Ko Aung Pyae Phyo
The Movie App ကို အခြေခံပြီး လေ့လာထားတဲ့ View (UI) Layer အတွက် Screen တည်ဆောက်တဲ့အပိုင်း ၊ Screen မှာ ပါဝင်တဲ့ Section တွေ တည်ဆောက်တဲ့ အပိုင်းတွေကို ကို အသုံးပြုပြီး the Movie Booking App ရဲ့ View (UI) Layer အပိုင်းတွေကို Student Project အနေနဲ့ တည်ဆောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
12 Videos4Lives4Articles
Test Automation အပိုင်းမှာ
Unit Testing with XCTest Framework
UI Testing with XCTest Framework
Custom Views in iOS Development
16 Videos0Live0Article
Custom View နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အပိုင်းမှာ ပါဝင်မဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကတော့
Extension ကို အသုံးပြုပြီး Custom View တွေ တည်ဆောက်တဲ့ အပိုင်း
Custom View တွေကို Complex List တွေ ပြန်လည်အသုံးပြုမှုနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့အပိုင်းတွေ ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Monthly Tutorial - the Movie App
0 Video0Live 1 Article
Ko Thet Tun Ko Zaw Htet Naing
July လ အတွက် Monthly Tutorial မှာတော့ the Movie App ကို Reactive MVP ပုံစံနဲ့ codebase မှာ layer တွေ ခွဲပြီး ရေးသား သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် ရှေ့မှာ လေ့လာခဲ့တဲ့ Test Automation အပိုင်း ၊ Custom Component အပိုင်းတွေကိုလဲ ထည့်သွင်းရေးသားသွားရမှာ ဖြစ်ပြီး API တွေကိုတော့ https://www.themoviedb.org/ က API တွေကို Application ထဲမှာ Access ပြုလုပ် အသုံးပြုသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Setting up Build Configuration & Xcode Shortcuts
11 Videos0Live 1 Article
Setting up Build Configuration & Xcode Shortcut Module မှာတော့
Codebase တစ်ခုတည်းမှာ Different Server ခွဲထုတ်တာတွေ ၊ မတူညီတဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံတွေကို Build Flavor ခွဲထုတ်တာတွေကို Setup ပြုလုပ်နိုင်မဲ့ ပုံစံတွေ
Xcode ကို Effective ဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ဖို့ Shortcut တွေနဲ့ Trick တွေကို
လေ့လာသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
37 Videos0Live0Article
ဒီ Module မှာတော့ Swift UI အပိုင်းကို အခြေခံကစပြီး Production Screen တစ်ခုကို Swift UI နဲ့ တည်ဆောက်နိုင်လောက်တဲ့ အခြေအနေအထိ လိုအပ်တဲ့ အပိုင်းတွေ အကုန်လုံးကို လေ့လာသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Monthly Tutorial - the Podcast App
0 Video0Live3Articles
Ko Ye Paye Sone Tun Ko Zaw Htet Naing Ko Aung Ko Ko Thet Ko Thet Tun
August လ အတွက် Monthly Tutorial မှာတော့ the Podcast App ကို Reactive MVP ပုံစံနဲ့ codebase မှာ layer တွေ ခွဲပြီး ရေးသား သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
11 Videos0Live0Article
ဒီ Module မှာတော့ iOS မှာ Different Notification Type တွေ Setup လုပ်တဲ့အပိုင်းကို ဆွေးနွေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Deep Dive into Firebase (iOS)
37 Videos0Live 1 Article
Production App အများစုမှာ အသုံးပြတဲ့ Firebase ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ဆွေးနွေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Firebase Installation & Configuration
Data Storage with Real-Time Database & Cloud Firestore.
Authentication using Firebase.
Setting up Notification and Firebase Cloud Messaging.